Semalt Inotsanangura Maitiro Okudzivirira Reddit.Com Referral Spam MuGoogle Analytics
Kana ukaona misika isina kujairika uye maonero akawanda pane account yako reddit.com, saka haufaniri kunetseka uye edza kugadzirisa zvirongwa zveGoogle Analytics account. Kakawanda munguva pfupi yapfuura, kuendeswa kweRussia kushandiswa kwepamuvara kwakatanga kuparadzanisa nzvimbo dzakasiyana-siyana dzakanyatsozivikanwa uye dzakakurumbira ndokugadzira nhamba dzakawanda dzeakanyorwa paGoogle Analytics vachishandisa mashoko evanhu. Vakagadzira mapepa akawanda ewebhu pa reddit - logiciel planning personnel gratuit excel.com uye vanozvifananidza kuva vafudzi vako zvakanaka. Vakaparadzanisa vashandisi uye mawebsite e-abc.xyz, addons.mozilla.org, uye iwextweb.com kusvika pamwero mukuru. Nokudaro, zvakanyanya kubvumirwa kubvisa avo vanonzi spammers vasati vanyanyisa uye vanopinda munhare yako pachako.
Ivan Konovalov, iyo Semalt nyanzvi, inotaura kuti chimwe chezvikonzero zvikonzero nei spammers spam yako yeGoogle Analytics data uchishandisa reddit.com kutumira motokari uye zvimwe zviitiko zvakakodzera zvakafanana ndezvokuti vanoda kuziva kubva rutivi uye vanoda kukukwezva kumakero avo ewebhu uye web browser dzakabatana. Paunenge uzarura hukama hwavo, uchaona kuti hapana chinhu chinobatsira kuverenga kana kufuridzirwa kubva. Asi kushanyira kwako nguva dzose kunotarirwa kune maonero avo, uye vanobhadhara nokuda kweGoogle AdSense. Mumwedzi ichangopfuura, reddit.com yakashandiswa nevanhu vakawanda kutumira spam kushanyira uye muthara kune nzvimbo dzakawanda..Yange iri nzira yakanaka yekusimudzira imwe nzvimbo, asi iye zvino haisi kupa zvibereko zvehutano.
Tsvina iyi yakatumidzwa sevanoshamwaridzana, uye haigoni kumira kusvikira matanho makuru asina kutorwa kwavari. Izvo zvakaderera zveurongwa uhwu hwekutsvaga ndeyokuti inogona kuparadza data muGoogle Analytics, zvichiita kuti zvive nyore kuti iwe uongorore uye uongorore ruzivo rwewebsite yako. Migwagwa inosvika kubva ku reddit.com iri iyi haina chokuita nekuvimbika. Pane kudaro, inobata deta yako yeGoogle Analytics zvikuru. Semuenzaniso, kutumira kunogona kuonekwa sekuuya kune imwe kana maviri mapeji ewebhu pawebsite yako uye ozosiya neanenge zana kubva muzana muzana. Migumisiro yakadaro haisi yakanaka yewebsite yako uye haifaniri kuiswa muGoogle Analytics yako. Mumamiriro ezvinhu akadaro, unofanira kufungisisa kufungidzira magwagwa uye kuve nechokwadi chokuti webhusaiti yako yakachengeteka.
Ichokwadi kuti kutumira spam kune simba rekuparadza ruzivo rwako rwekuongorora. Ichakukonzerawo matambudziko akasiyana-siyana kwauri uye inogona kukanganisa kutsvakurudza injini yewebsite yako. Nokuda kwechinangwa ichi, spammers vanoshandisa zvigadzirwa zvakasiyana-siyana uye mazano sezvavanoda kuve nechokwadi chokuti maonero ako webhutaneti anotarisa zvakasikwa, uye iwe unonzwa kuti motokari iri kusvika kubva reddit.com.
Referrer spammers dzinotarisa nzvimbo dzako nedheta ravo nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Somuenzaniso, vanoda kukurudzira mawebsite kuburikidza nemigumisiro yekutsvaga uye vanoda kukuisa mushure mekumhanya. Uyezve, vanoda kuwedzera yavo yeGoogle search injini yekukasika kuburikidza nekusika backlinks panzvimbo yako. Munzira ipi neipi, inogona kukuvadza webhusaiti yako uye inofanira kubviswa kare nekukwanisa.